I-Azuqua: Susa ama-Silos akho bese uxhuma i-Cloud ne-SaaS Izicelo | Martech Zone
NgoMsombuluko, Novemba 23, 2015 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 UMat Shanahan
UKate Legett, i-VP kanye nomhlaziyi oyinhloko e-Forrester kokuthunyelwe kwebhulogi ngo-Septhemba 2015 wabhala kokuthunyelwe kwakhe, I-CRM iyahlukaniswa. Isihloko Esiphikisanayo:
Gcina isipiliyoni samakhasimende ngaphambili nasenkabeni yenkampani yakho. Qiniseka ukuthi uyawasekela amakhasimende akho ohambweni lwabo lokugcina kuze kube sekugcineni ngokuzibandakanya okulula, okusebenzayo, nokujabulisayo, noma ngabe uhambo lwekhasimende luwela ezisekelweni zobuchwepheshe.
Ukuhlukaniswa kweCRM kudala ubuhlungu obudabula ulwazi kumakhasimende. Umbiko wamafu ka-2015 ngo- I-Netskope icaphuna ukuthi ibhizinisi elijwayelekile lisebenzisa izinhlelo ezingaphezu kwezingu-100 kukho konke ukumaketha kanye neCRM. Ngenkathi izinhlelo zokusebenza ze-SaaS ziqhuba ukusebenza kahle okukhulu, ziphinde zenze ubunzima kubasebenzisi bebhizinisi - njengokuhlanganisa nokuhlaziya idatha yamakhasimende. Ngokwesibonelo, eConsultancy uthole lokho idatha ehambayo phakathi kwezinhlelo (74%) iphakathi kwezinselelo zokumaketha ezibuhlungu kakhulu, noBluewolf bakutholile lokho Ama-70% wabasebenzisi beSalesforce kufanele bafake idatha efanayo ezinhlelweni eziningi.
I-Azuqua isiza amabhizinisi ukuxazulula lobu 'buhlungu kuzinhlelo zabo zokusebenza' ngokunika amandla abasebenzisi bebhizinisi ukuthi baxhume izinhlelo zefu ne-SaaS ngaphansi komzuzu owodwa, kufaka phakathi isisombululo esisha esibizwa I-Azuqua Yempumelelo Yamakhasimende. Idizayinelwe ukuqeda ama-siloes adalwe yi-CRM engafaniyo, ukumaketha okuzenzakalelayo, insiza kanye nezicelo zokusekela, i-Azuqua yeCustomer Success ivumela abasebenzisi bebhizinisi ukuthi bahlanganise idatha, basebenzise ukuhamba komsebenzi okubaluleke kakhulu kwebhizinisi futhi balawule ulwazi lwamakhasimende. I-Azuqua Yempumelelo Yamakhasimende iyatholakala kusukela ku- $ 250 ngenyanga.
I-Azuqua Yempumelelo Yamakhasimende ithola ama-CRM ethu, ukusekelwa kanye nezinhlelo zokusebenza zokuphathwa kwephrojekthi ezisebenza ngokubambisana ukuqeda ukufakwa kwedatha ngesandla. Ngokuzenzekelayo ukugeleza kwedatha, ukuthengisa kwethu, ukusekelwa kanye namaqembu okuphumelela kwamakhasimende angasebenza ndawonye ukudala umuzwa ophakeme wamakhasimende. UThomas Enochs, uVP Wokuphumelela KweKhasimende ku-Chef
I-Azuqua yeZici zeMpumelelo yamakhasimende ifaka ukuhlanganiswa kokufakwa kwezicelo okungaphezu kwama-40, kufaka phakathi i-FullContact, i-Gainsight, iMarketo, i-Salesforce, i-Workfront ne-Zendesk, ne-15 workflows eyakhelwe izinhloso. Esigabeni ngasinye sohambo lwamakhasimende, i-Azuqua ivumela abasebenzisi bebhizinisi ukuthi baxhume izinhlelo zabo ze-SaaS, benze ukuhamba komsebenzi okubaluleke kakhulu kwebhizinisi, futhi balawule ulwazi lwamakhasimende.
Umshini wokuphumelela wamakhasimende o-oiled kahle udinga ukuthi izinhlelo zakho zokusebenza zisebenze ngokubambisana ukuthola idatha engaguquguquki esatshalaliswa khona manjalo kuwo wonke amaphuzu wokuthinta wamakhasimende. Ukubaluleka nokugcina isikhathi, ngakho-ke uma izinhlelo zokusebenza ezinqanyuliwe zifaka ukulibaziseka namaphutha, lokho kuguqulela kumali engenayo elahlekile. Isixazululo sethu sidambisa ubuhlungu bakho ngokuqinisekisa ukuthi idatha evela kuma-akhawunti kanye noxhumana nabo iyafana kulo lonke uhlelo lokusebenza, izaziso zomsebenzisi kanye nezixwayiso zifike ngesikhathi, futhi ama-hand-offs anembile. UNikhil Hasija, i-CEO kanye nomsunguli obambisene naye e-Azuqua
I-Azuqua yokugeleza kokusebenza kweKhasimende ngempumelelo ihlanganisa:
Uhambo lwekhasimende: bamba futhi urekhode ingqophamlando yamakhasimende nokuhlukile kusukela ekusetshenzisweni, ebhodini, ekuqeqeshweni nasekubonisaneni.
Imininingwane yokuhlanganisa: hlanganisa i-akhawunti nedatha yokuxhumana kuzo zonke izinhlelo zokuzibandakanya kusuka ekusekelweni kuye ekumaketheni kuya emiphakathini eku-inthanethi.
Ukucebisa: hlanganisa nemithombo yedatha yokuphumelela kwamakhasimende yangaphandle efana ne-FullContact ukufaka ngokuzenzakalela idatha ku-akhawunti kanye namarekhodi wokuxhumana.
Ukuxhumana: qapha imicimbi noma izenzo ezibalulekile zempumelelo yamakhasimende futhi uthumele izexwayiso eduze nesikhathi sangempela nge-imeyili, umbhalo, noma ngomyalezo osheshayo.
Ukuhlelwa kwedatha: qinisekisa ukuthi i-akhawunti entsha noma evuselelwe nedatha yokuxhumana ivuselelwa ukusekela, ukubonisana, ukuqeqesha, ukumaketha, umphakathi nezinye izinhlelo zokusebenza.
Inqubo ye-orchestration: gcina imisebenzi nezindaba zisesikhathini kuzo zonke lezi zinhlelo zokusebenza
Bhalisela Isivivinyo Samahhala se-Azuqua
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, vakashela Azuqua.
Tags: azuquabluwolfCRMIdathaama-data silosi-forresterOkugcweleUkuxhumanaukubona kahleUKate Legettidatha yezokumakethaukuvumelanisa idatha yokuthengisaukuhlanganiswa kokumakethaumabhebhanaNikhil HasijasalesforceUThomas EnochsIndawo yokusebenzazendesk
UMat Shanahan uyi-CMO ku Azuqua, inkampani esiza amabhizinisi ukushintsha ukuhamba komsebenzi phakathi kwezicelo ze-SaaS, kufaka phakathi ezenhlalo, i-imeyili, ezokumaketha ezenzekelayo noma amasistimu weCRM abalulekile ekuphumeleleni kwamakhasimende. UMatt unolwazi olucishe lube yiminyaka engama-30 embonini yezobuchwepheshe, kusuka ku-Accenture kuya ekuqaleni. Ungusomabhizinisi oqinisekisiwe njenge-VP yokumaketha kwemikhiqizo nokuphathwa kweDocumentum kusukela ekuqaleni kuya ekunikezelweni komphakathi kokuqala futhi muva nje njengomsunguli kanye ne-SVP yamasu weScout Analytics.
Imibono eyi-12 Yokuhlukanisa Ukumaketha Kwakho Okuqukethwe
Nov 25, 2015 ngo-4: 55 PM
Lokhu okuthunyelwe okumangalisa impela. Ngicabanga ukuthi ubeke imizamo eminingi yokukhiqiza lokhu okuthunyelwe futhi kuwusizo kakhulu kimi nakwamanye ama-blogger. Siyabonga ngokwabelana ngokuthunyelwe okuhle kangaka.